ရိုးရိုးခေါငျးကိုကျတာလား ဦးနှောကျထဲက အကွိတျလား – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လူတိုငျးခေါငျးကိုကျဖူးသလို ခေါငျးကိုကျတိုငျးလညျး ဘာကွောငျ့ကိုကျသလဲ ကိုယျ့ဟာကို အဖွထေုတျလရှေိ့ကွတယျ။ ဘာစားမိလို့လဲ ဘယျသှားမိလို့လဲ..
တခြို့တှကေတြော့လညျး ဦးနှောကျ အကြိတျ လို ရောဂါအကွီးကွီးတှမြေား ဖွဈနတောလားလို့ကိုယျ့ကိုယျကို သံသယဝငျပွီး စိတျတှပေိုဖိစီးနတေတျကွတယျ။
ဒီတော့ ခေါငျးကိုကျက မသကျသာတဲ့ အပွငျ ပိုဆိုးလာကွတာပေါ့။ခေါငျးကိုကျတာတဈခုတညျးနဲ့တော့ brain tumour ဆိုတဲ့ ဦးနှောကျအကြိတျလို့ စှပျစှဲလို့ မရပါဘူး။ လူတဈယောကျ ခေါငျးကိုကျနိုငျခွမြေားသလောကျ..ခေါငျးကိုကျစတေဲ့ အကွောငျးတှမြေားသလောကျ ဦးနှောကျအကွိတျဖွဈနိုငျခွကေတော့ တျောတျောလေးနညျးပါတယျ။
? ဦးနှောကျထဲက အကြိတျဆိုတာဘာလဲ ??
Brain Tumour လို့ချေါပါတယျ။ ကငျဆာကြိတျ ဖွဈနိုငျသလို သူ့လောကျအန်တရာယျမမြား ပှားနှုနျးလညျးမမွနျတဲ့ ကငျဆာမဟုတျတဲ့ Benign Tumour တှလေညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကငျဆာကြိတျမှာလညျး ဦးနှောကျကစဖွဈတဲ့ အကြိတျထကျ တခွားကငျဆာတဈခုခုကနေ သှေးကွောကတဈဆငျ့ ဦးနှောကျကိုရောကျလာ အခွခေတြဲ့ Secondary အကြိတျတှကေ ဖွဈနိုငျခွပေိုမြားပါတယျ။
?အဖွဈမြားတဲ့ ခေါငျးကိုကျရောဂါတှကေ ဘာတှလေဲ ??
– စိတျဖိစီးလို့ကိုကျတဲ့ Tension headache
– ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတဲ့ Migraine
– အပူဒဏျကွောငျ့ကိုကျတဲ့ Heat headache
– မကျြရိုးတှကေိုကျ မကျြရညျနှာရညျတှပေါကပြွီးကိုကျတဲ့ Cluster headache
– ထိပျကပျနာကွောငျ့ကိုကျတဲ့ Sinus headache
ဒါတှကေ အဖွဈမြားတဲ့ ရောဂါတှပေမေဲ့ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိဘဲလညျး ခေါငျးကိုကျနနေိုငျပါသေးတယျ။
? ခေါငျးကိုကျရငျ ဘာလုပျရမလဲ ??
Paracetamol ပါတဲ့ ခေါငျးကိုကျပြောကျဆေးတဈခုခုသောကျပါ။
? ဘယျလိုလက်ခဏာတှပွေရငျ စိုးရိမျရမလဲ ??
– ရုတျတရကျ ထကိုကျမယျ..
– ကိုကျနကေပြုံစံ မဟုတျတော့ဘဲ သိသိသာသာ ပုံစံပွောငျးလာမယျ..
– ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တသမတျတညျး မခံနိုငျလောကျအောငျ ရကျပေါငျးမြားစှာ ကိုကျနမေယျ..
– မနကျအိပျယာထကတညျးက ကိုကျကိုကျနမေယျ ဆိုရငျတော့ သတိထားရပါမယျ။
နောကျထပျဒီလိုလက်ခဏာတှပေါ တှဲဖွဈလာရငျတော့ ပိုသတိထားရပါတော့မယျ။
– လကျ..ခွထေောကျတှေ လေးလံထုံကငျြလာရငျ
– ပြို့ အနျရငျ
– စကားပွောရခကျလာရငျ စကားပွောမမှနျဖွဈလာရငျ စကားလုံးရှေးရခကျလာရငျ
– သိသိသာသာ မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးလာပွီး သတိခဏခဏမလေ့ာရငျ ..
ဒါဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျအမွနျပွဖို့ လိုပါမယျ။ လိုအပျရငျ ဦးနှောကျအာရုံကွောဆရာဝနျနဲ့ပါ ဆှေးနှေးတိုငျပငျဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ ကှနျပြူတာဓာတျမှနျ (CT scan)..
သံလိုကျဓာတျမှနျ(MRI)စတာတှနေဲ့ စမျးသပျအဖွရှောဖို့ လိုကောငျးလိုနိုငျပါတယျ။
မပြောကျသေးရငျလညျး ရိုးရိုးကိုကျတာပဲ ဖွဈကွပါစေ..
ရိုးရိုးခေါင်းကိုက်တာလား ဦးနှောက်ထဲက အကြိတ်လား
လူတိုင်းခေါင်းကိုက်ဖူးသလို ခေါင်းကိုက်တိုင်းလည်း ဘာကြောင့်ကိုက်သလဲ ကိုယ့်ဟာကို အဖြေထုတ်လေ့ရှိကြတယ်။ ဘာစားမိလို့လဲ ဘယ်သွားမိလို့လဲ..
တချို့တွေကျတော့လည်း ဦးနှောက် အကျိတ် လို ရောဂါအကြီးကြီးတွေများ ဖြစ်နေတာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယဝင်ပြီး စိတ်တွေပိုဖိစီးနေတတ်ကြတယ်။
ဒီတော့ ခေါင်းကိုက်က မသက်သာတဲ့ အပြင် ပိုဆိုးလာကြတာပေါ့။ခေါင်းကိုက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ brain tumour ဆိုတဲ့ ဦးနှောက်အကျိတ်လို့ စွပ်စွဲလို့ မရပါဘူး။ လူတစ်ယောက် ခေါင်းကိုက်နိုင်ခြေများသလောက်..ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အကြောင်းတွေများသလောက် ဦးနှောက်အကြိတ်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ တော်တော်လေးနည်းပါတယ်။
? ဦးနှောက်ထဲက အကျိတ်ဆိုတာဘာလဲ ??
Brain Tumour လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကင်ဆာကျိတ် ဖြစ်နိုင်သလို သူ့လောက်အန္တရာယ်မများ ပွားနှုန်းလည်းမမြန်တဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ Benign Tumour တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာကျိတ်မှာလည်း ဦးနှောက်ကစဖြစ်တဲ့ အကျိတ်ထက် တခြားကင်ဆာတစ်ခုခုကနေ သွေးကြောကတစ်ဆင့် ဦးနှောက်ကိုရောက်လာ အခြေချတဲ့ Secondary အကျိတ်တွေက ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။
?အဖြစ်များတဲ့ ခေါင်းကိုက်ရောဂါတွေက ဘာတွေလဲ ??
– စိတ်ဖိစီးလို့ကိုက်တဲ့ Tension headache
– ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တဲ့ Migraine
– အပူဒဏ်ကြောင့်ကိုက်တဲ့ Heat headache
– မျက်ရိုးတွေကိုက် မျက်ရည်နှာရည်တွေပါကျပြီးကိုက်တဲ့ Cluster headache
– ထိပ်ကပ်နာကြောင့်ကိုက်တဲ့ Sinus headache
ဒါတွေက အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတွေပေမဲ့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲလည်း ခေါင်းကိုက်နေနိုင်ပါသေးတယ်။
? ခေါင်းကိုက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ??
Paracetamol ပါတဲ့ ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးတစ်ခုခုသောက်ပါ။
? ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြရင် စိုးရိမ်ရမလဲ ??
– ရုတ်တရက် ထကိုက်မယ်..
– ကိုက်နေကျပုံစံ မဟုတ်တော့ဘဲ သိသိသာသာ ပုံစံပြောင်းလာမယ်..
– ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တသမတ်တည်း မခံနိုင်လောက်အောင် ရက်ပေါင်းများစွာ ကိုက်နေမယ်..
– မနက်အိပ်ယာထကတည်းက ကိုက်ကိုက်နေမယ် ဆိုရင်တော့ သတိထားရပါမယ်။
နောက်ထပ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေပါ တွဲဖြစ်လာရင်တော့ ပိုသတိထားရပါတော့မယ်။
– လက်..ခြေထောက်တွေ လေးလံထုံကျင်လာရင်
– ပျို့ အန်ရင်
– စကားပြောရခက်လာရင် စကားပြောမမှန်ဖြစ်လာရင် စကားလုံးရွေးရခက်လာရင်
– သိသိသာသာ မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းလာပြီး သတိခဏခဏမေ့လာရင် ..
ဒါဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်အမြန်ပြဖို့ လိုပါမယ်။ လိုအပ်ရင် ဦးနှောက်အာရုံကြောဆရာဝန်နဲ့ပါ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် (CT scan)..
သံလိုက်ဓာတ်မှန်(MRI)စတာတွေနဲ့ စမ်းသပ်အဖြေရှာဖို့ လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။
မပျောက်သေးရင်လည်း ရိုးရိုးကိုက်တာပဲ ဖြစ်ကြပါစေ..
‘ညှငျး’ ရှိမရှိ ရှာကွညျ့ပွီးပွီလား